Akụkọ Bible: A Tọhapụ Ha n’Ụlọ Mkpọrọ - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
LEE mmụọ ozi nke na-emeghe ibo ọnụ ụzọ ụlọ mkpọrọ. Ndị ikom ọ na-akpọpụta bụ ndịozi Jizọs. Ka anyị chọpụta ihe mere e ji tụọ ha mkpọrọ.
Ọ dịbeghị anya a wụsara mmụọ nsọ n’isi ndị na-eso ụzọ Jizọs. Ma lee ihe merenụ: Otu ehihie, Pita na Jọn jere n’ụlọ nsọ dị na Jeruselem. N’ebe ahụ, otu nwoke nke dara ngwụrọ kemgbe a mụrụ ya nọ nso n’ọnụ ụzọ. Ndị mmadụ na-ebuga ya ebe ahụ kwa ụbọchị ka o wee rịọ ego n’aka ndị na-aba n’ụlọ nsọ ahụ. Mgbe ọ hụrụ Pita na Jọn, ọ rịọrọ ha ka ha nyetụ ya ihe. Gịnị ka ndịozi ahụ ga-eme?
Ha kwụsịrị lee nwoke ogbenye ahụ anya. Pita sịrị ya: ‘Enweghị m ego, ma ihe m nwere ka m ga-enye gị. N’aha Jizọs, bilie jee ije!’ Pita wee jide nwoke ahụ n’aka nri, o wee wụlie elu ozugbo, malite ije ije. Mgbe ndị mmadụ hụrụ ihe merenụ, o juru ha anya, ha enweekwa ezi obi ụtọ n’ọrụ ebube ahụ.
Pita sịrị ha: ‘Ọ bụ n’ike nke Chineke, onye mere ka Jizọs bilite n’ọnwụ, ka anyị rụrụ ọrụ ebube a.’ Mgbe ya na Jọn na-ekwu okwu, ụfọdụ ndị ndú okpukpe bịara. Ha were iwe na Pita na Jọn na-agwa ndị mmadụ na a kpọlitewo Jizọs n’ọnwụ. N’ihi ya, ha jidere ha ma tụọ ha mkpọrọ.
N’echi ya, ndị ndú okpukpe ahụ nwere nnọkọ. A kpọbatara Pita na Jọn na onye ahụ ha gwọrọ. Ndị ndú okpukpe ahụ wee jụọ ha, sị: ‘N’ike ònye ka unu rụrụ ọrụ ebube a?’
Pita gwara ha na ọ bụ n’ike Chineke, onye mere ka Jizọs si n’ọnwụ bilie. Ndị nchụàjà ahụ amaghị ihe ha ga-eme, n’ihi na ha apụghị ịgọnahụ na ọrụ ebube ahụ emeghị eme n’ezie. Ya mere, ha dọrọ ndịozi ahụ aka ná ntị ka ha ghara ikwu okwu ọzọ banyere Jizọs, wee hapụ ha ka ha laa.
Ka ụbọchị na-aga, ndịozi ahụ nọgidere na-ekwusa banyere Jizọs, na-agwọkwa ndị ọrịa. Akụkọ banyere ọrụ ebube ndị a gbasara. N’ihi ya, ọbụna ìgwè mmadụ si n’obodo niile dị Jeruselem nso na-ekutere ndịozi ahụ ndị ọrịa ka ha gwọọ ha. Nke a mere ka ndị ndú okpukpe ahụ na-emere ha anyaụfụ, ha wee dọkpụrụ ndịozi ahụ tụba ha n’ụlọ mkpọrọ. Ma ha anọghị ebe ahụ ogologo oge.
N’abalị, mmụọ ozi Chineke meghere ọnụ ụzọ ụlọ mkpọrọ ahụ, dị ka ị na-ahụ n’ebe a. Mmụọ ozi ahụ wee sị ha: ‘Gaanụ guzoro n’ụlọ nsọ Chineke, nọgidenụ na-agwa ndị mmadụ okwu.’ N’ụtụtụ echi ya, mgbe ndị ndú okpukpe zigara ndị ikom n’ụlọ mkpọrọ ahụ ka ha dute ndịozi ahụ, ha anọghịzi ya. Mgbe e mesịrị, ndị ikom ahụ hụrụ ha ebe ha na-ezi ihe n’ụlọ nsọ, ha eduru ha gaa n’ụlọ nzukọ Sanhedrin.
Ndị ndú okpukpe ahụ wee sị ha: ‘Anyị nyesiri unu iwu ike ka unu ghara izi ihe ọzọ banyere Jizọs. Ma unu ejiwo ozizi unu zijupụta Jeruselem.’ Ndịozi ahụ wee zaa ha, sị: ‘Anyị aghaghị irubere Chineke isi dị ka onye na-achị achị karịa mmadụ.’ Ha wee nọgide na-ekwusa “ozi ọma.” Nke ahụ ọ́ bụghị ezi ihe nlereanya nke anyị ga-agbaso?
Ọrụ isi 3 ruo isi 5.
Gịnị mere Pita na Jọn n’otu ehihie ka ha na-aga n’ụlọ nsọ?
Gịnị ka Pita gwara otu nwoke onye ngwụrọ, gịnịkwa ka Pita nyere ya bụ́ nke dị oké ọnụ ahịa karịa ego?
N’ihi gịnị ka ndị ndú okpukpe ji wee iwe, gịnịkwa ka ha mere Pita na Jọn?
Gịnị ka Pita gwara ndị ndú okpukpe ahụ, gịnịkwa ka a dọrọ ndịozi ahụ aka ná ntị banyere ya?
N’ihi gịnị ka ndị ndú okpukpe ahụ ji nwee anyaụfụ, ma gịnị mere mgbe e tinyere ndịozi ahụ n’ụlọ mkpọrọ nke ugboro abụọ ya?
Gịnị ka ndịozi ahụ zara mgbe a kpọbatara ha n’ụlọ nzukọ Sanhedrin?
Gụọ Ọrụ Ndịozi 3:1-10.
Ọ bụ ezie na e nyeghị anyị ikike ịrụ ọrụ ebube taa, olee otú okwu Pita nke e dekọrọ n’Ọrụ Ndịozi 3:6 si enyere anyị aka ịghọta uru ozi Alaeze ahụ bara? (Jọn 17:3; 2 Kọr. 5:18-20; Fil. 3:8)
Gụọ Ọrụ Ndịozi 4:1-31.
Mgbe anyị zutere mmegide n’ozi, olee ụzọ anyị kwesịrị isi ṅomie ụmụnna anyị Ndị Kraịst nke narị afọ mbụ? (Ọrụ 4:29, 31; Efe. 6:18-20; 1 Tesa. 2:2)
Gụọ Ọrụ Ndịozi 5:17-42.
Olee otú ụfọdụ ndị na-abụghị Ndịàmà, ma n’oge gara aga ma n’oge a, siworo gosi na ha nwere ezi uche n’ihe banyere ọrụ nkwusa anyị na-eme? (Ọrụ 5:34-39)